“Ma Dooneyno Neymar” Codbixin Laga Qaaday Taageerayaasha Real Madrid Oo Ay Ku Diideen Saxiixa Neymar Iyo Sababta Oo Ay Sharaxeen - Gool24.Net
“Ma Dooneyno Neymar” Codbixin Laga Qaaday Taageerayaasha Real Madrid Oo Ay Ku Diideen Saxiixa Neymar Iyo Sababta Oo Ay Sharaxeen
Iyadoo Real Madrid ay ka quusatay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba, waxa ay haatan awoodooda isagu geynayaan soo xerogelinta xiddiga reer Brazil Neymar ka dib markii ay PSG u soo bandhigtay madaxweynaha Los Blancos Florentino Perez.
Weeraryahanka 27 sanno jir ah ayaa si weyn u doonaya inuu ka tago Paris halka Real Madrid ay dooneyso inay la soo wareegto xiddig magac weyn ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga Yurub.
Dooqa koowaad ee Neymar waa Barcelona laakiin sidoo kalena ma diidi doono inuu u wareego Bernabeu haddii uu waayo fursad uu ugu laaban karo Camp Nou.
Inkastoo taageerayaasha Real Madrid ay jeclaan lahaayeen inay arkaan saxiix weyn ka hor inta uusan suuqa kala iibsiga xirmin hadana intooda badan ma doonayaan in saxiixa weyn uu noqdo Neymar.
Codbixin ay qaaday jariirada Isbaanishka ee AS oo ay ka qeyb qaateen in ka badan 160 kun taageerayaasl ah, waxa ay boqolkiiba 60 sheegeen inaysan dooneynin in kooxda ay la soo wareegto Neymar oo ay Madrid ku bixin doonto 200 milyan euro iyo ciyaaryahan.
Qiimaha Neymar, hab dhaqankiisa garoonka ka baxsan ee bilihii u danbeeyay iyo inuu u nugul yahay dhaawacyada ayaa ka mid ah waxyaabaha keenay in inta badan taageerayaasha Madrid ay ka soo horjeestaan in kooxdooda ay la wareegto Neymar xagaagan
“Waxaan ahay Madridista, waxaana u codeeyay maya” ayuu Juan Gonzalez oo ka mid ah dadkii ay ra’yiga ka uruurisay jariirada AS.
“Marka laga soo tago wararkiisa garoonka ka baxsan, ma doonayo inuu Madrid u saxiixo sababtoo ah waa ciyaaryahan u nugul dhaawacyada, dhaawicii cagtiisana weli kama uusan bogsanin. Waa maxay sababta ay Real Madrid lacag ugu qarashgareyneyso ciyaaryahan hore ka dhaawacmaya.”